[Review Sách] "Làm Bạn Với Bầu Trời": Số Phận Con Người Và Cái Tình Ẩn Đằng Sau Đó | Anybook.vn - Anybook
[Review Sách] “Làm Bạn Với Bầu Trời”: Số Phận Con Người Và Cái Tình Ẩn Đằng Sau Đó | Anybook.vn
Fanamarihana: Ny lahatsoratra dia misy singa izay manambara ny votoatin’ny boky.
Manaova namana amin’ny lanitra – nosoratan’ny mpanoratra malaza Nguyen Nhat Anh – tena fahafahana vaovao, traikefa hafa ao an-tsaiko. Nalaza be tamin’ny asa literatiora momba ny fandrosoan’ny taona i Nguyen Nhat Anh, dia nahazo ny fon’ny mpamaky taranaka maro noho ny fomba rustic, ny fanoratana tsotra nefa mampihetsi-po, ary ny fehezanteny tsotra. Tantara tsotra izy io, saingy manana fiantraikany mahery vaika eo amin’ny sain’ny olona.
Na izany aza dia te-hiaiky amin’ny mpamaky aho fa tsy “passion” tamin’ny bokiny toy ny namako sy ny havako aho, na dia efa namaky ny sanganasan’ny mpanoratra vitsivitsy aza aho, hatramin’ny vao haingana. Amin’ny ankapobeny, amin’ny faran’ny tolakandro, somary mavo ny masoandro, ny toetr’andro dia mety amin’ny fotoana miaraka amin’ny boky. misafidy aho Manaova namana amin’ny lanitra miaraka amin’ny fisalasalana sy ny fanomezana, nefa rehefa avy namaky azy aho dia tsapako fa ilay boky no nifidy ahy. Nanova kely ny fijeriko an’io karazana io ity tantara ity. Ny ody teo amiko, mpamaky sy Manaova namana amin’ny lanitra malemy fanahy nefa tena mangina.
Andao hiaraka amiko hitsidika an’i Teo, ny trio an’i Lam, Nghi ary Hang.
Sombiny momba ny mpanoratra
Nguyen Nhat Anh dia solon’anarana mahazatra ao amin’ny tontolon’ny literatiora vietnamiana maoderina indrindra indrindra ary miaraka amin’ireo mpamaky tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-20 – tany am-piandohan’ny taonjato faha-21. Fantatra amin’ny alalan’ny asa soratra maro momba an’io lohahevitra io izy. Fony mbola zatovo, dia nalaza be tamin’ny mpamaky ny sanganasany. ary maro amin’ireo sanganasany no namboarina ho sarimihetsika.
Ny halemem-panahy, ny hafanam-po ary ny fahamaivanana dia fahatsapana mahazatra ao amin’ny sanganasan’i Nguyen Nhat Anh. Tsy dia mitabataba loatra, maika, ny pitsopitsony tsy ampoizina dia mbola mamerina ny mpamaky, mifamatotra amin’ny tantara mampalahelo sy mahafaly amin’ny fahazazana, madio sy marefo toy ny ando, ny fahatsiarovana ny fahazazana, ny fotoana handehanana any an-tsekoly, ny fitiavana ny fianakaviana, namana, ary na dia ny vibration voalohany tsy manan-tsiny eo amin’ny fiainana.
Naheno olona naneho hevitra aho indray mandeha, raha te-hahita tapakila hiverenana amin’ny fahatanoranao tsy manan-tsiny sy mivembena ianao, dia vakio ny asa soratr’i Nguyen Nhat Anh, na efa antitra ianao na efa antitra loatra. herinandro, na mbola zazakely, mila isika rehetra. ireo tantara ireo amin’ny fotoana rehetra amin’ny fiainantsika.
(Ampahany avy amin’ny “Nguyen Nhat Anh – mpitari-dalana ho an’ny fahazazana”, Linh Dong – Revelogue)
Manaova namana amin’ny lanitra ary teny vitsivitsy momba ny asa teo aloha
Ny pejy 231 amin’ny boky amin’ny taratasy A5 dia tsy lava loatra fa tsy fohy koa. Heveriko ho safidy an-kolaka izany, ampy hanentanana ny faniriana hamaky teny ary amin’ny fotoana iray ihany no hitazonana ny mpamaky. vita aho Manaova namana amin’ny lanitra tamin’ny adin’ny roa tolakandro dia nitsoka ny rivotra. Hitako fa fanapahan-kevitra marina sy traikefa lehibe izany.
Tsy ity no boky voalohany novakiako an’i Nguyen Nhat Anh, fa heveriko fa izy no tena miavaka. Ny eritreritra, ny toe-tsaina eo amin’ny fiainana amin’ny fotoana famakian-teny, ny fotoana famakiana na ny tontolo iainana dia ireo lafin-javatra rehetra misy fiantraikany mafy amin’ny famakiana boky. Na toy ny hevitro teo aloha.”Tsy ianao no mifidy ny boky fa ny boky no mifidy anao“. Misy ody ny zava-drehetra. Farany, tonga koa ny anjarako sy Nguyen Nhat Anh. Manaova namana amin’ny lanitra dia symphony mendri-piderana misy naoty miakatra sy midina miaraka amin’ny haavo miitatra manerana. Hitantsika eto ny sarin’ny tenantsika fony mbola zaza, ny fitiavana tanora, ny fisakaizana akaiky, ary ny fisakaizana matanjaka. Ary ambonin’ny zava-drehetra, ny maha-olombelona tsara tarehy.
READ Những cuốn sách của Tuệ Nghi nổi bật nên đọc | Anybook.vn
Eto, manasa anao aho hamaky ny traikefako amin’ny Manaova namana amin’ny lanitra.
Anjara mahatsikaiky sy ny fomba fiainan’i Teo
Manaova namana amin’ny lanitra Hatrany amin’ny pejy voalohany amin’ilay boky, dia gaga aho tamin’ireo fanambarana tena mahitsy sy tsotra nefa manohina ny fo. Miseho be dia be ny fikambanana sy ny personifications. Ny votoatiny dia tena voafaritra sy miavaka, saingy hatreto dia vitsy ny olona nijery izany satria heverina ho zava-misy miharihary nandritra ny taona maro. I Nguyen Nhat Anh no nampiasa ny faharanitan-tsainy mba hanehoana amin’ny mpamaky ny maha-vaovao sy tsara tarehy ireo endri-javatra mahazatra ireo ankehitriny.
– Rehefa Aho Nitomany aho, nofafako tamin’ny tanako ny ranomasoko. Tamin’izany fotoana izany koa ny tanako mitaraina. Feno ranomaso koa.
Nijery an’i Teo aho, “ah” feo iray:
– Dia izay! Ka efa nitomany ve ianao? tsy mbola?
– Eny, lehilahy. Tany am-piandohana nandry teo amin’ny toerana iray, ny tanako foana mitaraina.
Mazava ho azy fa manenina aho nametraka an’io fanontaniana io tamin’i Teo.
Soa ihany fa nanohy ny teniny i Teo:
– Saingy mihena isan’andro mitaraina noho ny. Hatramin’izao dia tsy misy intsony izany mitaraina indray. Efa hainy ny mitazona penina sy boky, kilalao ary zavatra maro hafa.
Nanomboka tamin’ity boky ity dia nilaza tamin’ny tenako aho fa tokony hampiasa tsoratadidy, naoty mipetaka mba hanoratana zavatra tsara. Izany no fanapahan-kevitra nety. Nanoratra aho “!!!!” mamaky ity paragrafy ity. Ny fihetseham-po tamin’izany fotoana izany dia tsaroako mandrakizay, indrindra fa gaga sy nalahelo kely. Avy amin’ny teny nalaina momba ny tanan’i Teo nitomany ka hatramin’ny hoe miresaka momba ny ratram-po voalohany, dia niaina fisondrotana ara-pihetseham-po aho. Raha voalaza etsy ambony, ny teny Nguyen Nhat Anh nampiasain’ny teny Teo toy ny manidina eo amin’ny pejy, dia tsy manan-tsiny sy feno fiainana, avy eo amin’ny andalana manaraka, ny zava-drehetra dia milamina ao anatin’ny segondra vitsy.
Ny ampahany voalohany dia manokatra sehatra iray tsy misy dikany ary feno tantara momba ny mponina ao amin’io faritra io. Sambatra na mampalahelo, mampitomany ny mpamaky nefa mampitsiky ihany koa. Amin’ny ankapobeny, ny zava-drehetra dia manodidina ny tovolahy iray avy any ambanivohitra tonga ao an-tranon’ny zanak’olo-mpiray tam-po aminy mba hanasitrana. Ny tantara iray, raha miseho eo amin’ny fiainana andavan’andro, dia hampitomany ny olona fotsiny, fa amin’ny alalan’ny fehezan-tenin’i Nguyen Nhat Anh, ny mpamaky tahaka ny olona monina ao amin’io tanàna io dia manana ny fiainany manokana sy ny traikefany. dia marani-tsaina ary tena mahafatifaty.
Heveriko fa ity no tian’ny mpamaky sy ankafizina indrindra amin’ny tantaran’i Nguyen Nhat Anh. Ny mpanoratra dia manome antsika ny fahatsapana “miparitaka”, ny fahatsapana miaina ao anatin’ireo toko ao amin’ny tantara. Tsy mamaky tantara aho fa miaina amin’ny teny! Tsy fahita firy io traikefa io ary sarotra hita. Ny fandrobohana tanteraka ny mpamaky amin’ny fehezanteny no fanamby lehibe indrindra ho an’izay nanoratra hatramin’izay.
Araka ny voalaza tetsy ambony dia mahafaly sy mampalahelo indraindray ny fiainan’ny olombelona. Ny tantaran’ny fiainan’i Teo dia mampiato ny mpamaky, fa ny fomba fiainan’i Teo sy ny fitondrany ny olona manodidina, ny fiainana andavanandron’ilay mpitantara Lam dia mampitsiky antsika amin’ny molotra, ary ao am-pontsika indray.
READ 5 cuốn sách hay về lối sống tối giản đọc để sống hạnh phúc hơn | Anybook.vn
Tsy mitaraina momba ny anjara na ny olona manodidina mihitsy i Teo, fa misafidy ny hiaina – hiaina araka ny heviny tany am-boalohany: mahita ny fiainana amin’ny mason’ny fisalasalana tsotra, ny fisalasalana, ny fanantenana ary ny fiparitahana tsy miato. Mandehana any amin’ny Fizarana Faharoa amin’ny Manaova namana amin’ny lanitra, Mahafantatra bebe kokoa momba ny fiainan’i Teo teo aloha isika amin’ny alalan’ny masony manokana, amin’ny alalan’ny tantaran’i Dadatoa Vinh, Lam ary ireo izay tia azy.
Tena tsy maintsy nijanona elaela aho rehefa avy namaky ity ampahany ity. Ny zava-nitranga nifandimby, ary ny ankamaroany dia tsy dia tsara loatra, dia nahatonga ny fiainan’ny zaza valo taona ho mankaleo sy tsy miraharaha. Nefa! Ny tena miavaka amin’ity boky ity dia ny teny hoe “nefa”. Mifidy ny hiaina araka izay tiantsika rehetra hiainana izy: tsy misy tsiny, tsy misy lolompo na lonilony. Mbola tia ny fiainana izy io, mitondra ny anjara sy ny olona amin’ny fitiavana lalina. Nisafidy ny hanohitra ny fiainana feno fikorontanana i Teo.
Hitako fa manana hevitra marina momba ny rahalahiny ny rahalahin’i Ti – Teo.
Rehefa nieritreritra teo aloha sy aoriana kely i Ti dia faly nahita ny marina: Angamba noho i Teo dia zaza manana fanahy madio sy manonofy. Eo imason’ny ankizy toy izany dia mahafinaritra foana ny fiainana.
Ho an’ny maro dia rindrina tsy mihetsika sy mangina fotsiny ilay izy, fa ho an’i Teo dia nandihy ny rindrina ary tsy maintsy nandre ny sioka. Nieritreritra aho anakampo, nahita ny tenako nitsiky.
Azo lazaina fa nandefa toetra tsara ho an’ny mpamaky i Nguyen Nhat Anh. Toy ny nofinofy napetraky ny mpanoratra ao anatiny ny fihetseham-pony i Teo. Teo sy ny toetrany no irin’ny olona saingy indrisy fa mbola vitsy ny olona tratra. Tsotra be izany, saingy matetika no very ireo zavatra tsara tarehy ireo.
Fotoana ahatsapantsika ny hakanton’ny fiainana
Niresadresaka i Lam sy Nghi tamin’ny voalohany ka nampihomehezako, saingy nieritreritra izany hatrany hatrany aho.
– Tena tsara ianao. Tsy tadidiko na inona na inona fony aho telo taona.
– Tamin’io fotoana io dia niverina teny amin’ny tokotanin’ny sekoly fanabeazana fototra ilay kamiao mitondra sarimihetsika. Nivondrona ny tanàna manontolo mba hijery. Tsy maintsy ao ianao, fa tsy tsaroanao fotsiny.
– Oh, azo antoka. Tadidiko sy hadino aho tato ho ato. Tsy maintsy efa antitra ianao.
Nampihomehy ahy i Nghi:
– Vao folo taona ianao.
“Saingy zokiko fito taona aho noho ny tamin’ny faha telo taonako.”
Manaova namana amin’ny lanitra Sakafo feno feno mamy sy mangidy izy io – ireo zava-manitra mahafinaritra eo amin’ny fiainana. Misy ny fotoana mampitomany antsika tsy voafehy nefa sady mampitony ny sary tsara tarehy sy tsotra etsy ambony. Mifangaro amin’ny gadona gadona izy ireo ary mitarika mora foana ny fon’ny mpamaky sy ny sain’ny mpamaky ho any amin’ny tontolo kanto misy ireo mpilalao, Teo, Lam, ary ny olona ao an-tanàna.
Mampihomehy ny antsipirian’ny ankizilahy folo taona mitaraina fa antitra. Na izany aza, misy dikany kokoa izany ary lalina kokoa noho ny eritreretintsika. Ohabolana”Fito taona anefa aho noho ny tamin’izaho telo taona“Nanenjika sy naverina tao an-tsaiko hatramin’ny andro namako ilay boky.
READ Review sách Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi | Anybook.vn
Takatry ny olona mazava tsara isan’andro ny fahanterana nefa zara raha miatrika izany am-pahatsorana amin’ny fomba mahay mandanjalanja sy mahitsy toa an’i Nghi. Raha mba manana toe-tsaina toy izany isika manoloana ny fahanterana, mamarana izany amin’ny vazivazy miaraka amin’ny namana fa tsy mivadibadika isan-kariva momba ny ankehitriny sy ny ho avy.
Nanomboka nilalao tamin’i Teo aho dia nianatra zavatra maro taminy. Mibanjina ny hafa aho. Tsapako ny natiora. Haiko ny mankamamy voninkazo, ravina ary tia ny vorona manidina eny ambony. Noho izany, tsapako fa ny fiainana manodidina ahy dia naverina tamin’ny loko hafa, vaovao sy mampihetsi-po kokoa, ka lasa mahafinaritra kokoa.
Heveriko fa tsy i Lam irery no mihevitra izany. Toy izany koa no tsapako. Saingy tsy noho ny fisaorana an’i Teo ihany, fa mankasitraka ireo mpilalao rehetra izay nanome traikefa mahagaga aho. Efa ela no tsy nahafahako nijanona sy nahatsapa ny tsara indrindra amin’ny boky.
Heveriko fa ny hafatra misongadina indrindra ao Manaova namana amin’ny lanitra dia fitiavana olombelona. Raha namaky hatramin’izao, dia tsy maintsy ho hitan’ny mpamaky ny tiako ilay boky. Noho izany dia tsy te hanambara be loatra momba ny antsipiriany aho fa manasa ny mpamaky mba handinika manokana azy.
Rehefa avy namaky aho dia hitako fa ao amin’ny tsiny no misy lefona, ao amin’ny ratsy vintana dia misy vintana. Ny fanomezan-tsiny an’ilay raim-pianakaviana (na dadatoa) no nahatonga ny hambom-po ho ambony noho ny fihetseham-po, izay nitarika ho amin’ny fitondrana tsy ara-drariny an’i Teo avy eo ary rehefa tonga saina tampoka dia nitranga indray ny fahadisoana. Omeo tsiny ilay renim-pianakaviana nandeha lavitra ny trano, nefa tsy niverina nijery ny zanany efa ho folo taona. Omeo tsiny ny fiainana ho sarotiny loatra amin’i Teo indrindra, ireo mpilalao hafa amin’ny ankapobeny.
Saingy avy eo, tiako koa izy ireo. Mangoraka an’i Neny (na dadatoa) aho satria te hitandro ny fahadiovan’ny zaodahiny, te hanana fahazazana tsara tarehy i Teo, ary niaritra ela ny tsy fifankahazoan’ny vadiny. Malahelo an’ilay raim-pianakaviana tsy nahalala ny fahamarinana koa aho, sy ilay reny niteraka izay nijaly mafy fony izy mbola kely.
Dia izay, ny fITIAVANA!
Mahatonga antsika hahatakatra ny toe-javatra rehetra eo amin’ny fiainana sy ny anjara. Avelao izahay hianatra ny tantara ao ambadiky ny andro idyllic. Eny tokoa, ny fitiavana ao Manaova namana amin’ny lanitra nahatonga antsika hanana fotoana feno fiaraha-miory sy fahatakarana lalina. Izany no tena ankafiziko indrindra amin’ity lahatsoratra ity.
Noho ny anton-javatra objectif sy subjective izay tena ankasitrahako Manaova namana amin’ny lanitra, mankamamy ny olona sy ny tantarany. Be dia be ny tiako holazaina fa mampalahelo fa ny rantsan-tanako dia tsy mahazaka ny fikorianan’ny fihetseham-po sy ny eritreritro. Amin’izao fotoana izao, manantena aho fa ny mpamaky dia hanana traikefa mahafinaritra sy lalina amin’ny boky.
Famerenana amin’ny antsipiriany nataon’i: Fang – Bookademy
Previous: Top 110+ Những Câu Chửi Hay Nhất Thế Giới Cực Thâm Nho | Anybook.vn
Next: Mẫu hồ sơ xin việc chuyên nghiệp, ấn tượng | Anybook.vn